Haaromsaaf Mirkaneessi karaarraaf dheertoo ijaarame maraa mirkaneessuuf qabduu Haaroms Dheertoo Taliigairraa cuqaasi.Dheertoowwan filatarkaneessuuf, bafata halqaraa banuuf mirga cuqaasi, ittaansuudhan Haaromsi filii.
yeroo qabdu Haaromsii cuqaastu yookin ajaja Haaroomsi filtu, qaaqni Haaromsa Dheertoo ni agarsiifama, jireessa haaromsaa battalumatti jalqabu mirkaneessa.
Wayita haromsaaf mirkanaa'amu, agarsiiftuu guddinaa argita. Qaaqa keessatti mul'isuuf ergaawwan muraasaaf eegi, yookiin haqi cuqaasi mirkaneessaa haaromsaa kutuuf.
yoo haaromsi hijiranne,ergaan qaaqa keessaa kan si'itti himu haaromsi hinjiru.Qaaqa cufi.
yoo haaromsi jiraate ,haaromsi yookiin ofumaan ijaarama yookiin gocha tokkon deebisuu qabda.
Qaafni Haaromsa Dheertoo tarii galfatawwan kan filatamu hindan deenyee fi haaromsi ofumaan hin raawwanne qabata.
Hikannoonni hin guutamne (haaromsi faayiloota baay'ee yookiin haaraa jaaraman barbaada)
Mirga fayyadaa qubsaa hin taane(Dheertoo Taliigaa baafata irraa, garuu dheertoowwan hirame haaromfamuu kan danda'u yeroo %PRDUCTNAME) hin kaane, fi fayyadama mirga sirrii qabu qofaan). Gad fageenyaaf Taliigaa Dheertoo ilaali.
hAAROMSI HUJEEKAA BARBAACHI
Yeroo qabduu Ijaari cuqaastu qaaqni Gadi fe'ii fi Ijaarsaa ni mul'ata.
dHEERTOWWAN MARRI KAN KALLATTIINFE'AMAN AMMAFE''amaniiru.Guddinni qaaqa IJaaromsaa fiFe'iinsaa keessatti mul'ata yoodheertoon fe'amuu hin dandeenya,ergaan agarsiifama.Dalagni dheertoowwan hafaniif itti fufa.
Dheertoowwan murtaa'an gaalee waliin\_"sakatta'a haaromsarratti bu'uureffate/"Dheertoowwan kunneen DhjeertooTaliigaatiinfe'amuu hin danda'ani Sapha phuuniyya'aa dirqama haaromqa dheertoo fe'uu iddoola saphuu murtaa'a irraa banama.Iddoolli suntanii tuqaatii fayyadamaabaay'ee dheertoo fe'uufbarbaadu.Ergafe'insaan booda dheertoo hojeekan dirqamaijaani fakkeenyaaf lama cuqaa suun sajoo dheertooiyyaa'aafaayiliikeessaa.
Dheertoof akka/"iyya'a haaroomsa bu'uureffate\_"mallatta'e,Taliigni Dheertoo iyya'aa saphuu iddoola saphphuu walfaanaa irratti banuuda nda'a.kun kan uumamu yeroo qaaqa cuftu, erga haaromsa dheertoo biroo feeteen booda.yoo dheertowwan hinjirre kan kallatti fe'aman,ittaansuun iyya'a saphaphuu batta umatti jalqabe.
Erga dheertoon dhymaafe'ameen booda,ijaaromsi niijalqaba Jalqaba dheer towwan haaromfaman marri kanhaaro msimilkaa'inaan fe'amuudand a'amu nihaqamu.Ittaansuu dhaan dheertowwan haarofaman niijaaramu.yoo dogoggorri uumame,ergaan ijaarame nikufa, garuu dalagni itti fufa.
Yoohaaromsii Fe'iinsaraawwatameefi qaaqa Ijaarramu kanmill'isuxumuuramuuaati.Fe'iinsaafi hojjatuijaaramu qabduu Haaroomsa kutii cufaasuudhaan kutuu dandeessa.
Haaromsa mara mul'isi
Karaa durtiitiin, dheertowwan fe'anaa qaaqa keessatti qofa mul'atu. Dheertowwanii fi ergaawwan dogoggoraa biroo ilaaluuf Haarumsa mara mul'isii mallattessi.
Title is: Haaromsa Dheertoo